Xaaliyaan jijjiirama Ityoophiyaa keessatti dhufe ni jajjabeessiti- MM Juuseeppee Koontee – Fana Broadcasting Corporate
Xaaliyaan jijjiirama Ityoophiyaa keessatti dhufe ni jajjabeessiti- MM Juuseeppee Koontee
Finfinnee, Onkololeessa 2,2011(FBC)-Mootummaan Xaaliyaan fooyya’iinsa diinagdee fi siyaasaa Ityoophiyaa keessatti dhufaa jiru kan jajjabeessituu fi dinqisiifattu ta’uu Muummeen ministira Xaaliyaan Juuseeppee Koontee ibsaniiru.
Muummeen Ministira FDRI Dooktar Abiy Ahmad Muummee ministira Xaaliyaan Juuseeppee koontef masaraa mootummaatti affeerraa laaqanaa godhaniif.
Dureewwan lamaan hariiroo biyyoota isaanii irratti marii bu’a qabeessa taasisuu ibsaniiru.
Biyyoota lamaan gidduutti walitti hidhamiinsa daldalaa, invastimantii,bu’uuraalee misoomaa fi dhimmoota baqattootaa irratti waliin hojjechuuf walii galaniiru.
Dooktar Abiy biyyoota Ityoophiyaa deeggaran keessa Xaaliyaan isaan jalqabaa keessatti kan argamtu ta’uu ibsuun, nageenya naannichaaf deeggarsa biyyattiin taasisaa jirtu cimee itti fufuu akka qabu gaafataniiru.
Juuseeppee Koonten gama isaanitiin jijjiirama diinagdee fi siyaasaa Ityoophiyaa keessatti dhufaa jiru dinqisifachuun biyyi isaanii jijjiirama kana cinaa kan dhaabbattu ta’uu hubachiisaniiru.
Gama biraanis waraanni Ityoophiyaa fi Eertiraa gidduu ture gara boqonnaa nageenyatti cehuun isaa bilchina hoggansaa ta’uu himaniiru.
Hariiron biyyoota lamaanii gama hundaan cimee itti fufuu akka qabu Juuseeppee Koonten ibsaniiru.
Muummeen ministira Xaaliyaan Juuseeppee Koonten Muummee ministira FDRI Dooktar Abiy Ahmad Xaaliyaan akka daawwatan affeeraniiru.
Dooktar Abiy Ahmadis affeerricha kabaja guddaan fudhataniiru.